स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक सुरु
सरकारसँग ११ बुँदे सहमति पश्चात् पहिलो पटक डा. सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आइतबार सिरहाको लहानमा राष्ट्रिय परिषद्को बैठक सुरु भएको छ । सो सहमति पश्चात् मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको गठबन्धनको बैठकमा मधेशका २२ जिल्लाबाट २ सय प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागि भएको गठबन्धनका नेता सुदीपराज कुशवाहाले जानकारी दिएका छन् । ....
प्रदेश स्तरिय तीन दिने कार्यशाला लहानमा सुरु हुँदै
प्रदेश २ स्तरिय तीन दिने एडभान्स रिसर्च म्याथोलोजि विषयक कार्यशाला शुक्रबारदेखी सिरहाको लाहनमा प्रारम्भ हुन गइरहेको छ । ....
“भ्रष्टाचार अन्त नभएसम्म विकास सम्भव छैन्”
विवेकशिल साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्य राज आचार्यले पार्टीको दर्शन, लक्ष्य, मार्गदर्शक सिद्धान्त र मूल्य मान्यता वारे जानकारी दिएका छन् । “मधेश मन्थन” श्रृंखला २ बारे सोमबार सिरहाको लहानमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पार्टी प्रवक्ता डा. आचार्यले मुलुकमा भ्रष्टाचारले जडो गाड्दै गएकोले यसको अन्त नभएसम्म विकास सम्भव नहुने बताए । ....
‘बुलेट प्रुफ’ ज्याकेटसहित सीके राउतका सुरक्षा गार्ड सार्वजनिक
‘स्वतन्त्र मधेश’ गठबन्धनका संयोजक सीके राउतका सुरक्षा गार्ड पहिलोपल्ट जनकपुर विमानस्थलमा आइतबार सार्वजनिक भएका छन् । सरकारसँग ११ बुँदे सहमति भएपछि जनकपुर जाने क्रममा राउतलाई स्वागत गर्न कार्यकर्ता र सुरक्षाका लागि सुरक्षा गार्ड विमानस्थल सार्वजनिक रुपमा देखिएका हुन् ।....
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पार्टी कार्यालय रौतहटका झण्डा झुकाइएको छ । नागरिक तथा उडयन पर्यटक मन्त्रालयका मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलीकप्टर दुर्घटनामा निधन भएकोमा पार्टीको झण्डा झुकाइएको हो । ....
बालक बेपत्ता हुने क्रम वृद्धि
सिरहाको नवराजपुर–२ मझौराका ११ वर्षीय आशुतोषकुमार यादव फागुन १० गते बेपत्ता भए । लहानस्थित लिट्टिल स्टार बोर्डिङ स्कूलमा अध्ययनरत उनी बिहान ६ बजे ट्युसन पढ्न गएका र त्यसपछि अहिलेसम्म घर फिर्ता नआएको आशुतोषका काका शैलेन्द्रप्रसाद यादवले बताउनुभयो ।.....
प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नं. २ जनकपुरधाम मातहतका बिभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुबाट खटिएको छुट्टाछुट्टै प्रहरी टोलीले तीन महिनाको अवधिमा बिभिन्न प्रजातिका अबैध काठ बरामद गरेको छ ।....
दुई बालिकालाई जबरजस्तिकरणी गर्नेहरु पक्राउ
सिरहाको छुट्टाछुट्टै स्थानमा दुई जना बालिका जबरजस्तीकरणीको शिकार भएकी छिन् । ती दुबै घटनाका आरोपीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका १३ वस्ने १४ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्तिकरणी गरेको अभियोगमा स्थानिय एक यूवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ....
सीमा क्षेत्रमा हुने लागुऔषध ओसार तथा भन्सार छली गरिने अवैध कारोवारलाई नियन्त्रण गर्न चलाइएको अभियानलाई पर्सा प्रहरीले निरन्तरता दिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले वीरगञ्जका विभिन्न स्थानबाट २१ किलो चरेससहित पाँच, नौ सय थान नाइट्रोभेट ट्याब्लेटसहित एक र भन्सार छली भित्र्याइएको रु ३३ लाख बढी मूल्यको कपडासहित ठोरी गाउँपालिकाबाट तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।....
सरकारले तराई मधेसको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा काम अघि बढाएको छ ः प्रम ओली
सिरहा÷प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशका बारेमा विभिन्न हल्ला चलाइएपनि सरकारले तराई मधेसको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा काम अघि बढाएको बताएका छन् । शहीद हेमनारायण यादवको १५ औं स्मृतिसभालाई शनिबार सिरहामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले हुलाकी सडकको निमार्ण, भैरवहा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सबै तराईकै विकासका लागि सञ्चालन भएको बताए । केही दिनअघि झापा विमानस्थलमा रात्रीकालिन उडान सेवा सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले जनकपुरमा केही महिनामा यस्तो सेवा सुरु हने बताए ।....